गायीका मधु क्षेत्रीले भनिन् हो म प्रेममा छु , उहाको परिवारले मलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ (भिडियो हेर्नुहोस्) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / गायीका मधु क्षेत्रीले भनिन् हो म प्रेममा छु , उहाको परिवारले मलाई धेरै माया गर्नु हुन्छ (भिडियो हेर्नुहोस्)
सोचे झैँ जिन्दगी रैनछ।’ यो गीतको सफलतासंगै चर्चामा आएकी हुन् गायीका मधु क्षेत्री । कैलालीकी उनी सो गीतवाट निकै चर्चित भइन् । सांगीतीक क्षेत्रमा जम्नका लागि मधुले संघर्ष गर्न थालेको दशक बढि भईसकेको थियो । तर उनको जीवनमा ‘सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ’ बोलको गीन भने टर्निङ प्वाइन्ट नै भयो । उनैले गाएका सो गीतका शब्द उनको जीवनमा पनि मिल्दो थिए । उनी सयौँ पटक लड्दै उठेकी छिन् ।
४.कट्रिना विक्कीको बिहेमा आउन यस्ता सर्त पुरा गर्नुपर्ने भएपछि रिसाए पाहुना, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
५.‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
६.कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य